Nakaton’i Torkia indray ny YouTube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2019 5:48 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny septambra 2007)
Fanindroany tao anatin'ny taona, nodidian'ny fitsarana tiorka, tamin'ny talata 18 septambra 2007, ny hanakanana ny fidirana amin'ny YouTube.com noho ireo lahatsary lazaina fa manivaiva ny mpitarika ny firenena.
Narahana fitarainan'ny mponina iray tao atsinanan'ny tanànan'i Sivas ny fanapahan-kevitra fa nahitana horonantsary manevateva ny ray mpanorina an'i Torkia, Mustafa Kemal Ataturk, ny filoha Abdullah Gul, ny praiminisitra Recep Tayyip Erdogan sy ny tafika ny tranonkala.
Fotoan-tsarotra ho an'ny youtube any Torkia izany. Nipoitra tamin'ny gazety malaza indrindra ao amin'ny firenena ….sy tao amin'ny lapan'ny fitsarana ny andian-tsahotaka tamin'ny adihevitra nateraky ny lahatsary iray nasionalista hiringiriny, navoaka tao amin'ny Youtube, izay midera ny famonoana ilay mpanao gazety Tiorka Armeniana Hrant Dink. Araka ny tatitry ny Turkish Daily News, nilaza ny mpisolovava an'i Dink fa “mandrisika ny olona hanao heloka bevava fankahalana amin'ny alalan'ny fihoarana amin'ny foko sy ny fivavahana ary amin'ny fiderana mpamono olona” ilay lahatsary, ary manomana ny hametraka fitoriana momba izany izy ireo.
Tamin'ny Martsa tamin'io taona io, nakaton'ny mpamatsy tolotra fifandraisan-davitra lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Turk Telekom nandritra ny roa andro ny YouTube, taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana izay milaza fa naniratsira ny rain'i Torkia maoderina, Kemal Atatürk, ary ny vahoaka Tiorka ny horonantsary hita tao amin'ilay tranonkala.
Tamin'ny 17 aogositra 2007, nakaton'ny Fitsarana Sivily Faharoa Fatih, Tiorka ao amin'ny ambaratonga voalohany ny fidirana ao amin'ny anaran-tsehatra wordpress.com manontolo taorian'ny lazaina fa fanalam-baraka ny Islamika-mpanorina Tiorka, Adnan Oktar, aka Harun Yahya.